Ururka Dhakhaatiirta Indhaha Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu yagleelay Hogaana doortay (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa looga dhawaaqay urur ay ku mideysanyihiin dhakhaatiirta indhaha qaabilsan ee soomaaliya, waxaana magaca ururkan loo bixiyay ”ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed.
Waxaa lagu doortay munaasabaddaas aadka loo soo agaasimay saddex xubnood oo kala ah gudoomiye, ku xigeen & xoghayaha Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, kuwaas oo hogaan u noqn doona ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed.
Doorashadaan loogu tartamayay jagooyinkaas oo u dhacday si gacan taag ah ayaa waxaa xilka gudoomiyanimo ku guuleystay muddada labada sano ee soo socota Dr C/samad Xassan Haye halka ku xigeena looga dhigay Dr Maxamed Axmed Maxamuud (Dr Shiine) xubinta saddaxaad ayaa ahaa xoghayaha joogtada ee ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed oo isna loo dortay Dr Xalaal.
Dr Cali Baashi Cumar Rooraaye oo ahaa sii hayihii xilkaan lala wareegay ayaa natiijadii kama dambeysta ahaa ku dhawaaqay wuxuuna sheegay in loogu kala guuleystay jagooyinkaas sida aan kor ku soo xusnay, sido kale Dr Cali BaasHi wuxuu si aada ugu ololeeyn jiray in la sameeyo ururkaan dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed ey ku midoobayaan isagoona sheegay in wax badan ay ka bali doonaan baahida caafimaad ee dadka indhaha ka xanuunsanaya.
Dr C/samad Xassan haye oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay tahay u jeedada aasaaska ururka dhakhaatiirta indhaha in lawajaho dhibka ay ku heyso indha la’aanta & arag yarida Soomaaliya oo la ogyahay xitaa gobolada dalka inaaney jirin caafimaad qab sax ah oo dhanka indhaha dadka ka xanuunsanaaya, isagoona sidoo kale sheegay iney ku guuleysteen sanidihii la soo dhaafay wada shaqeyn ka dhaxeysay iyaga iyo dadkii ay la shaqeynaayeen, wuxuuna ballan qaaday iney sameyn doono mudada uu xilka haayo siminaaro kor loogu qaadaayo xirfadlayaasha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya dhanka indha si ay u noqdaan dad takhasus wanaagsan u leh waxa ay sameynayaan isagoona hadalkiisa sii raaciyay iney beegsan doonaan dhamaan meelaha indha la’aanta laga soo sheegaayo.
Ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed Dr Maxamed Axmed Maxamuud (Dr Shiine) ayaa tilmaamay in dadka indha la’aanta ee ku sugan Soomaaliya ay gaarayaan 140,000 oo qof isagoona sheegay iney sanad waliba ku soo biiraan in ka badan 14,000 oo qof oo cusub isagoona intaa ku sii daray in dadaalada hadda lawado aysan dabooli Karin baahida caafimaad qab ee ka jirta dadka indhaha ka xanuunsanaya.
Ugu dambeyn waxaa ka soo qeybgalay munaasabadaan lagu aasaasaayay ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed masuuliyiin ka socotay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyagoona sheegay iney soo dhaweynaayaan ururkan cusub.